Hanashadii Kooxda Liverpool Ku Hanatay Horyaalka Horyaalka Premier League Iyo Wax Kastood Uga Baahan Tahay Kulamadii Guusha Ku Hogaamiyey? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Hanashadii Kooxda Liverpool Ku Hanatay Horyaalka Horyaalka Premier League Iyo Wax Kastood Uga Baahan Tahay Kulamadii Guusha Ku Hogaamiyey?
1990kii ayaa ugu dambaysay farxad noocan ah iyo inay dhegta qabtaan koobka qiimaha badan ee ay kooxaha badan u loollamaan.
Jurgen Klopp ayaa noqday ninka dib u dhisay, isku habeeyey, unkayna koox dib usoo ceshata haybaddii ay dunida ka lahaan jirtay Liverpool, isla markaana koobkii ay ahaan jirtay kooxda ugu guulaha badan dib ugu soo laabatay ee ku guuelysatay.
Waqtiyo badan oo ay goob-joog u ahayd kooxo ay ka mid ahaayeen Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City iyo Leicester City oo koobka Premier League kala qaadaya, kaliya iyaguna ay daawadeyaal ka ahaayeen, Liverpool hadda ayaa loo sacabinayaa, looguna hambalyeynayaa inay yihiin guuleystaasha sannadkan boqorrada ka ah Premier League.
Khamiistii ayuu soo xidhantay werwer kasta oo Anfield dul-saarnaa, kaas oo bilihii March, April ilaa May uu ka jiray walaac ah in xili ciyaareedka aanay guushiisa kulamada badan ka xigin la kansalo.
Tababare Jurgen Klopp ayaa markii uu shaqada kooxda qabtay, waxa shirkiisii jaraa’id ee ugu horreeyey uu ku sheegay in Liverpool ay horyaalka Premier League ku guuleysan doonto sannadka 2020, waxaanay saadaashiisii noqotay mid rumowday.
Waxa laga yaabaa inuu arkayay muddada ay ku qaadanayso inuu dhiso Liverpool, laakiin labadii sannadood ee ugu dambeeyey ayaa iyaguna ahaa kuwo uu guulo gaadhay, kuwo kalena ku dhowaaday.
Fasal ciyaareedkii hore waxay ku guuleysteen Champions League, midkii kasii horreeyeyna Real Madrid ayaa finalkii ay iskugu soo baxeen oo kaga qaadday magaalada Kiev.
Premier League waxay ku waayeen hal dhibic oo ay Man City kaga guuleystay sannadkii hore, balse isagana doorkan ayay soo ceshadeen oo ay yihiin horyaalka.
Hayaanka Jurgen Klopp ee xili ciyaareedkan wuxuu soo bilaabmay kulankii ugu horreeyey, waxaanay kooxdiisu ahayd mid aan dhinaceeda dhulka la dhigin oo aan ciyaar kaliyana laga badin illaa laga soo gaadhayay lama-filaankii ay kala kulmeen Watford oo ka joojisay inay jabiyaan rikoodhkii Guul-darro la’aanta ee Arsenal.
Inta ay dariiqa guusha kusoo jireen, waxa ugu muhiimsanaa 10 ciyaarood oo qayb ka qaatay in ugu dambayntii ay farxad ugu dabbaal-degto horyaalka, waxaanay kulamadaasi yihiin sidan:
Newcastle 2-3 Liverpool – Sabti May 2, 2019
Waxay ahayd ciyaar adag oo ay dadku indhaha ku hayeen, laakiin may ahayn fasal ciyaareedkan, waxaanay ahayd dhamaadka xili ciyaareedkii hore ee 2018-19, hase yeeshee waxay kasoo unkeen qaab ciyaareed la qaban kari waayey.
Kulankani wuxuu siiyey Liverpool inay Manchester City kusii cidhiidhiyaan hoggaanka ay haysay, muhiimadda kale ee uu lahaana waxay ahayd in saddex maalmood ka hor ay kasoo laabteen Barcelona oo lugtii hore ee Champions League ee fasal ciyaareedka hore ay ugu tageen Camp Nou. Inkasta oo ay si fiican usoo ciyaareen, haddana Barcelona ayaa 3-0 kusoo adkaatay.
Virgil van Dijk iyo Mohamed Salah ayaa Newcastle United laba gool ka dhaliyey, laakiin waxay ahayd barbarro 2-2 ah illaa laga soo gaadhayay daqiiqaddii 86aad, markaas oo uu Divock Origi u dhaliyey goolka guusha.
Southampton 1-2 Liverpool – Sabti August 17, 2019
Waa maalintii uu hayaanka horyaalku sida dhabta ah ugu bilaabtay, xafiiltanka Manchester City na ay galeen. Goolhaye Alisson Becker ayaa dhaawac kasoo qaadhay muruqa ciyaartii tan ka horreysay, waxaana garoonka soo galay Adrian oo aan kalsooni badan lagu qabin, laakiin goolhayaha reer Spain waxa uu qabtay shaqo wanaagsan.
Sadio Mane iyo Roberto Firmino ayaa qaybtii hore goolasha u dhaliyey Liverpool, laakiin waxa waqti dambe lagu garaacay qalad uu sameeyey goolhaye Adrian oo uu ka faa’iidaystay Danny Ings, Kooxda Manchester City waxa kulankan ay iyaduna la ciyaartay Tottenham ku qabatay barbaro 2-2 ah.
Chelsea 1-2 Liverpool – Axad September 22, 2019
Liverpool 2-1 Leicester – Sabti October 5, 2019
Aston Villa 1-2 Liverpool – Sabti November 2, 2019
Liverpool 3-1 Manchester City – Axad November 10, 2019
Leicester 0-4 Liverpool – Khamiis December 26, 2019
Liverpool 2-0 Manchester United – Axad January 19, 2020
Wolves 1-2 Liverpool – Khamiis January 23, 2020
Norwich 0-1 Liverpool – Sabti February 15, 2020
manchester united iyo suuqa kala iibsiga.
Willian Borges Oo Ka Tagaya Kooxda Chelsea Balse Maku Biiri Doonaa Kooxda Barcelona?